Swag ဆိုတာဘာလဲ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည် တန်ဖိုးရှိပါသလား။ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, မေလ 3, 2022 အင်္ဂါနေ့, မေလ 3, 2022 Douglas Karr
စီးပွားရေးလုပ်နေတာကြာနေပြီဆိုရင်တော့ ဘာကိုသိလဲ။ ခိုးရာပါပစ္စည်း သည် သို့သော် ဝေါဟာရ၏ အရင်းအမြစ်ကို သင်တွေးဖူးပါသလား။ Swag သည် တကယ်တော့ 1800s များတွင် အသုံးပြုခဲ့သော ခိုးယူပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် လုယက်ခြင်းအတွက် ဘန်းစကားဖြစ်သည်။ ဝေါဟာရ အိတ် ဗန်းစကားအတွက် ရင်းမြစ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိ... လုယက်မှုအားလုံးကို အိတ်ဝိုင်းထဲထည့်ကာ လွတ်မြောက်သွားခဲ့သည်။ ခိုးရာပါပစ္စည်း. အယ်လ်ဘမ်အသစ်ထွက်ရှိခြင်းနှင့်အတူ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို အိတ်တစ်ထုပ်နှင့် အမှတ်တံဆိပ်ပါပစ္စည်းများကို စုစည်းကာ 2000 ခုနှစ်များအစောပိုင်းတွင် အသံသွင်းသည့်ကုမ္ပဏီများမှ ဝေါဟာရကို လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည်... DJ များသည် ၎င်းတို့၏အနုပညာရှင်ကို ပိုမိုအာရုံစိုက်လာလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဗျူဟာက အများကြီး မပြောင်းလဲသေးပါဘူး… ပြင်ပက ဘယ်သူ့ကိုမှ လုယက်စရာ မလိုတော့ဘူး။ ၎င်းတို့၏ဌာနချုပ် သို့မဟုတ် ကွန်ဖရင့်တစ်ခုတွင် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုနှင့် လည်ပတ်ပါ၊ အခမဲ့ယူဆောင်သွားသော ပစ္စည်းအချို့နှင့် သင်တွေ့ဆုံလေ့ရှိသည်… သင်၏ ခိုးရာပါပစ္စည်း။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အချို့သော swag တွေက ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပြီး ဈေးသက်သာပြီး ဟိုတယ်အမှိုက်တွေကိုသာ ရှာတွေ့ပါတယ်။ တခြား ဆော့ဖ်ဝဲကလည်း တော်တော်လှတယ်။
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး swag ပစ္စည်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ကမ္ဘာကျော် USB drive တစ်ခုပါ။ St. Elmo's စားသောက်ဆိုင် Indianapolis မြို့လယ်တွင်။ အဲ့ဒီမှာ ကုန်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ မိသားစု ခရီးစဉ်တချို့အကြောင်း အွန်လိုင်းမှာ မျှဝေလိုက်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့က သူတို့ရဲ့ စိတ်ကြိုက်ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေ၊ ငံပြာရည်တွေနဲ့ ဒီကျောက်မျက်ရတနာလေးတွေ ပြည့်နေတဲ့ အိတ်ကို အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ ငါ့စားပွဲပေါ်မှာ (ဖုန်ထူတဲ့) ထိုင်ထားပြီး စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ နှစ်သက်ဖွယ်အမှတ်တရတွေကို အမြဲယူဆောင်လာပေးပါတယ်... နဲ့ သူ့ရဲ့ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ပုဇွန်ကော့တေး။
ကောင်းပြီ၊ အဲဒါပဲ။ $ 24 ဘီလီယံအထိ မေးခွန်း၊ ဟုတ်တယ်? အဖြေမှန်က... တစ်ခါတစ်လေ။ swag ၏နောက်ကွယ်ရှိသီအိုရီသည် ဘက်ပေါင်းစုံမှဖြစ်သည်။
အမှတ်တံဆိပ် - အခမဲ့လက်ဆောင်ကိုတံဆိပ်ကပ်ခြင်းဖြင့် သင်သည် အမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်ကို တည်ဆောက်နိုင်သည်။
မှတ်ဉာဏ် - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတစ်ခုကို ပံ့ပိုးခြင်းဖြင့်၊ အလားအလာ သို့မဟုတ် ဖောက်သည်သည် သင့်၊ သင့်အမှတ်တံဆိပ်၊ သင့်ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် သင့်ဝန်ဆောင်မှုကို ၎င်းတို့အား အမှတ်ရစေသည့် အရာတစ်ခုဖြင့် ထွက်ခွာသွားမည်ဖြစ်သည်။
အပြန်အလှန် - တစ်စုံတစ်ယောက်ကို လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါတိုင်း၊ အသေးအမွှားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ငါတို့က အဲဒီလူကို ပြန်ပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့ မွေးရာပါလူသားခံစားချက်တစ်ခုရှိတယ်။
Sales Hacker မှလူများသည် A/B စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ရာ ၎င်းတို့သည် ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုတွင် swag ကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်... ရလဒ်ကြောင့်ပင် လန့်ဖျပ်သွားကြသည်။
ခိုးရာပါ လက်ခံရရှိသည့်အဖွဲ့သည် အစည်းအဝေးကို ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန် သုံးဆပိုများပြီး စမ်းသပ်အုပ်စုတွင် အလားအလာတစ်ခုလျှင် အခွင့်အလမ်းတန်ဖိုး 2.42 ဆ တိုးလာသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ကျွန်ုပ်သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်ပြီး စျေးကြီးသည်ကို ပို၍တန်ဖိုးထားပါသည်။ ခိုးရာပါပစ္စည်း အမှိုက်ပုံးကို ဖြည့်ပေးမယ့် ဈေးပေါတဲ့ အရုပ်တွေထက်။ အထူးသဖြင့် သင့်လက်ခံသူအတွက် တစ်နည်းနည်းနဲ့ တန်ဖိုးရှိနေရင်ပေါ့။ ခြွင်းချက်တော့ ရှိတာပေါ့။ Shrimp Cocktail USB drive ကို မသုံးပါဘူး... ဒါပေမယ့် အရမ်းမိုက်လို့ စားပွဲပေါ်မှာ သိမ်းထားလိုက်တာ။
မင်းရဲ့ Swag ကို ဘယ်မှာ ဒီဇိုင်းဆွဲ၊ အမိန့်ပေး စီမံနိုင်မလဲ။
ခိုးရာပါပစ္စည်းကို ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ကိုးကားခြင်းနှင့် စရိတ်စကများကို လျှော့ချရန် လုံလောက်သောအမိန့်ပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရန် အချိန်ကုန်ခဲ့ရဖူးသည်။ ဝဘ်သည် သင်မသိနိုင်သော စျေးပေါပြီး ကမ်းလွန်တွင်ရှိသော ဆိုက်များစွာဖြင့် ထွန်းကားခဲ့သည်။ နှစ်အတော်ကြာအောင် ပိုးမွှားကောင်းကောင်းရအောင် ကြိုးစားခဲ့ပြီး အမြဲတမ်း ပူသည်ဖြစ်စေ အေးသည် ။
Swag.com သင့်အမှတ်တံဆိပ်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် swag ဝယ်ယူရန်အတွက် အထူးဖန်တီးထားသော site တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ထုတ်ကုန်ထောင်ပေါင်းများစွာကို စီစဥ်ပြီး စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး – ခေတ်မီ၊ လူကြိုက်များပြီး အထင်ကြီးစရာ ထုတ်ကုန်များ၏ ထိပ်တန်း 5% တွင် ၎င်းတို့၏ စာရင်းကို ကန့်သတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် swag ဝယ်ယူမှုအတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးကိုလည်း အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာကို အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်၊ သင့်ဒီဇိုင်းကို အပ်လုဒ်လုပ်ခြင်း၊ သင့်ထုတ်ကုန်များကို ပုံတူကူးခြင်းနှင့် ငွေရှင်းခြင်းတို့ကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
Swag.com တွင် အိမ်၊ ရုံး၊ အဝတ်အစား၊ သောက်စရာ၊ အိတ်၊ နည်းပညာ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ထုတ်ကုန်များ ရှိပြီး ၎င်းတို့တွင် ရွေးချယ်ရန် နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ သင်၏ Swag ဗီရိုကိုပင် အွန်လိုင်းတွင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
ဦးဆောင်လမ်းပြများကို အလားအလာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းအပြင်၊ သင်၏အကောင်းဆုံးဖောက်သည်များကို ဆုချရန်၊ အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးများကို လူသားဆန်စေရန်နှင့် သင်၏အဝေးမှဝန်ထမ်းများနှင့်ပင် ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် swag ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ယခုပင် ကောင်းမွန်သော Swag ကို ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။
ထုတ်ဖော်: ငါကတစ် ဦး Affiliate ပေါ့ Swag.com ပြီးတော့ ဒီဆောင်းပါးမှာ လင့်ခ်ကို သုံးနေတယ်။
Tags: swag အလုပ် လုပ်တယ်။စွန့်ကြဲသည်အမိန့် ခိုးရာပါပစ္စည်းအပြန်အလှန်အကျိုးပြုပုဇွန်ကော့တေးst elmosခိုးရာပါပစ္စည်းswag.comUSB drive